HERBICIDE "CARIBOU": SHARAXAAD, TILMAAMO ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Herbicide "Caribou": Saameynta ficilka, barista, heerka isticmaalka
Dhibaatada dhabta ah ee dalagyada miraha sonkorta ayaa ah cayayaanka, sida beero qoyan, hadhuudh, barafka kulul ee Teofrasta, noocyada kala duwan ee buuraleyda iyo kuwa kale. Waxay ka qaataan ciidda laba jeer ka badan macdanta ka badan khudaarta cagaaran caafimaad leh. Dabcan, tani waxay horseedaysaa hoos u dhaca soo saarista. Mid ka mid ah habka ugu wax ku oolka ah ee lagula dagaallami karo haramaha dicotyled, xitaa haddii beerta si fiican loo soo saaro, waa Caribou herbicide, oo leh ficil balaadhan oo ballaaran.
Maadaama walaxda firfircoon ee diyaargarowga waxaa loo isticmaalaa triflusulfuron-methyl, oo ah maaddadaas oo ah 500 g halkii kiilo ee geedaha. Walaxkani ayaa iska leh fasalka sulfonylureas.
Ma taqaanaa? Copper sulfate waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay aaladii ugu horeysay ee ficilka xulashada adduunka. - Qarnigii 19aad, saynisyahannadu waxay ogaadeen awoodda xaruntan inay joojiso koritaanka cawska dicotyled.
Foomka la sii daayo, baako
Baakulada waxaa la siiyaa suuqgeynta xirmooyinka waraaqda hawada ah oo ay ku jiraan 10 kiish ah oo kiimiko ah oo daroogada ah. Baakadahan oo kale, haddii aanad ku xad gudbin xakameyntooda, waxay haysaa guryaha saddex sano. Xirmooyinka baakidhka uma baahna inay furaan marka isticmaalka daroogada, ay ku jiraan biyaha. Herbicide lafteeda waxaa loo heli karaa sida budada wettable.
Si loo daweeyo dabocase sonkorta waxaa badanaa loo isticmaalaa isku darka taangiga, isaga oo ku daraya geed-geedka kale, sida "Lontrel" ama "Dual Gold", sunta cayayaanka, fungicides iyo Bacriminta macdanta.
Daroogadaasi waxay leedahay tiro ka mid ah faa'iidooyinka aan la dafiri karin, gaar ahaan:
wuxuu bilaabaa inuu si dhakhso ah u dhaqmo;
Herbicide waa mid aad u xulasho ah oo loogu talagalay xididdo;
waxaa lagu dabaqayaa heerkulka kala duwan ee heerkulka;
Isticmaalka wuxuu u oggolaanayaa inuu yareeyo isticmaalka herbicides kale;
ma xaddidaan wareegga beeraha;
waxaa si wanaagsan loo isticmaali karaa cimilada qalalan;
Ma jiraan wax xayiraad ah oo ku saabsan isticmaalka balliyada ku dhow.
Ma taqaanaa? Qiyaastii 4.5 milyan oo tan oo ah herbicides kala duwan ayaa loo isticmaalaa aduunka oo dhan.
Daawada ayaa badanaa lagu naqshadeeyaa caleemaha haramaha, ilaa xad ka hooseeya - xididdadooda. Marka laysku daro xayawaanka qaybta unugyada haramahasidaas darteed joojiyaan koritaankooda kadib saacado yar uun. Ka dibna, cagaarshadu waxay samaysaa midabyo anthocyanin ah (casaan, casaan, buluug), ka dibna chlorosis ayaa lagu arkay iyaga oo natiijada ay u dhintaan. Nidaamka oo dhan wuxuu caadi ahaan qaataa 10-15 maalmood.
Caribou waa mid wax ku ool ah. marxaladda horumarinta haramaha si 2 caleemo oo loo wada dhan yahay. Noocyada qaarkood (codka gabbaldayaha, beerta garbaha) marxaladda ugu muhiimsan waxay kor u kacdaa wajiga 6 caleemo. Taas ka dib, waxtarnimada daroogada ayaa hoos u dhacda, inkasta oo cawsku istaago sii kordhaya, ma dhiman karaan.
Isticmaalka daroogada "Caribou" ayaa kuu ogolaanaya inaad xakamayso cayayaanka sida amaranth, euphorbia, nettles, chamomile, rezedu, Veronica, iloobin-aan-aan, dhalashada ee madow madow, celandine, ambrosia.
Isticmaalka tiknoolajiga, isticmaalka xal
Waxaa lagula talinayaa in ay qaaddo labalaabinta dhirta dabiiciga ah ee daroogada "Caribou" heerkulka hawada laga bilaabo +15 ilaa +25 ° S. Waqtiga ugu horreeya ee isticmaalka daroogada, xididdo waa in ay ahaataa mid ka mid ah gobolka biqilka (laga bilaabo 70% ilaa 90% geedo), ama wajiga xiran ee safka. Daaweynta labaad waxaa la sameeyaa 7-15 maalmood kaddib marka ugu horeysa.
Waa muhiim! Waxaa si adag looguma talin inaad isticmaasho daroogada "Caribou" ilaa laga gaaro biqilka dabocase.
Diyaarso xal in lagu buufiyo beerta iyadoo loo eegayo tilmaamaha isticmaalka, oo ku saleysan heerka isticmaalka 30 g geedka kicinta "Caribou" halkii hektar. Miisaanka xalka waa 200 litir oo hektar ah. Marka hore, biyaha waxaa lagu shubaa weelka, ka dibna bacda loo yaqaan "Caribou" waa la kala diraa, isla markaana isku dar ah ayaa la kariyaa ilaa daroogada si dhammaystiran loo kala diro.
Dareerisyada kale waxaa badanaa lagu daraa tuubada (horeyba waxay u jirtaa qaab diyaarsan). Ka dibna ku dar qadarka biyaha ee loo baahan yahay, dhammaadkana, waa qasab inuu ku daro walaxda "trend-90" oo ah walxaha dusha sare leh (surfactant) oo ah 200 ml hektar. Dhammaan tallaabooyinkan waxaa lagu sameeyaa si joogto ah oo xal ah.
Saameynta ugu weyn ee saameynta herbicide ayaa lagu arkay haddii Caribou loo isticmaalo isku dar ah daawooyinka kale. Waxay ku habboon tahay cayayaanka ugu badan, laakiin ka hor intaan isu diyaarin isku darka noocaas ah, waxaa lagugula talinayaa inaad la tasho khabiiro.
Waa muhiim! Ha isticmaalin "Caribou" isku dar ah cayayaanka noolaha ee organophosphate.
Tallaabooyinka badbaadada ee shaqada
Daroogada waxa loola jeedaa heerka saddexaad ee khatarta. Markaad taabatid, waa inaad isticmaashaa kabaha caagga ah iyo gacan-gashiyada, guud ahaan, oogada, neef-qabatin. Waa lagama maarmaan in la fuliyo hawsha cimilada, laakiin dabayshu waa la oggol yahay, xawaare aan ka badnayn 5 m / s.
Ku kaydi "Caribou" baakad asalka ah oo leh daacadnimo joogto ah. Qolka meesha lagu kaydiyo, helitaanka carruurta waa in laga reebo. Intaa waxaa dheer, waxaa loo kaydiyaa si gooni ah ka soo abuur iyo feed.
Guud ahaan, "Caribou" herbicide waxaa loo macneyn karaa hab wax ku ool ah oo lagula dagaallami karo haramaha dicotyled-ka ee duufaanka sonkorta leh. Marka si sax ah loo dalbado, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si buuxda uga takhalusto noocyada kala duwan ee haramaha.